Nezvedu - Shijiazhuang Jipeng Import uye Export Co, Ltd.
Tikugashirei webhusaiti yedu!
Email Tsigiro plumbingsales01@sjzmetal-electric.com
Stainless Simbi Coupling & Grip Collars
Manhole Kavha uye Kusvirwa, Gully
Stainless Simbi Yekukanda Zvikamu
Shijiazhuang Jipeng Import uye Export Co, Ltd.
"Isu tiri nyanzvi yemapaipi! Isu tiri nyanzvi yekukanda!"
Isu tiri inotungamira ekunze uye yekudyara kunze sangano iyo yakabvumirwa neChipatara chekunze Hupfumi uye Hwekutengesa yePRChina, uye yakagadzwa muna 1998. Kambani yedu inoshongedza zvigadzirwa zvesimbi nezvicherwa, michina, zvigadzirwa zveindasitiri uye zvigadzirwa zvemagetsi. Izvo zvinonyanya kubatsira uye zvigadzirwa zvigadzirwa ndeipi mapaipi uye accessories, zvakare zvikamu zvekukanda kwesimbi. Mundima yebhizinesi iyi, takapupurira uye takabatanidzwa munhoroondo yayo nekusimudzira kubva pakutanga. Kusvika ikozvino, tave tiri mundima iyi kwemakore anopfuura makumi maviri.
1. Hapana-hub yakakanda simbi pombi sisitimu, zvigadziriso uye isina stendi yesimbi couplings yekuvaka dhodhi, marara uye vent maererano ne EN877, DIN19522, ASTM A888, CISPI301, CASB70, ISO6594.
2. Socket uye spigot yakakanda simbi ivhu pombi system maererano neBS4622, BS437, BS416, ASTM A74.
3. Ductile yakakanda mapombi esimbi uye zvigadzirwa zvekuburitsa mvura yemunda ISO2531, EN545, EN598.
4. Manhole inovhara uye chimiro kune EN124, SS30: 1981, zvicherwa, pasi uye padenga remadhadha.
5. Yakasiyana-siyana kukandwa uye kukanganwira uye machining zvikamu maererano nevatorwa vatyairi kurasa kana samples. Zvigadzirwa zvinogona kuve ductile, kabhoni simbi uye isina stainless simbi.
Zvigadzirwa zvedu zvinogara zvine mukurumbira mumisika yekune dzimwe nyika uye zvinotengeswa zvakanyanya kuUSA, Canada, nyika dzeEurope, Southeast Asia nyika, Russia, HK neTaiwan etc. Tinovimbisa kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pakusvitsa nguva uye sevhisi chaiyo. Vatengi vese vekunze uye vekunze vanogamuchirwa kune kambani yedu nefekitori.
1. Yakatangwa muna1998, kambani yedu ine nhoroondo refu, iyo shanduko inodarika 20million US dollars. Isu tine ruzivo rwakakwana rwekushandira vatengi vedu vekunze, chaiyo projekiti maneja kutaurirana nezve zvigadzirwa, kubata magwaro uye nyaya dzekutumira nezvimwe .. Isu hatigone kungogadzira zvigadzirwa chete, asiwo kuva OEM, kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana kana kukanda zvikamu zvinoenderana nevekunze mutengi. zvidhori kana samples.
2. Vatengi vanogona kunakidzwa nekuchinja uye kuita kwakanaka kwezvinhu pano, imwe yemabhenefiti edu ndeyekuunganidza mhando dzakasiyana dzezvinhu mumidziyo imwe izere, vamwe vatengi vedu vanongoda kudarika marudzi mashanu ezvigadzirwa zvenguva imwe muhari imwe chete. Izvo zvichave zvakanyanya nyore kune vatengi vedu.
3. Quality kudzora iri rimwe rakakosha basa revatengi vedu. Munguva yekugadzira kana kuti isati yatumirwa, yedu yemhando controller ichave iri mufekitari yekumhanyisa kutumira uye kutarisa mhando uye mushumo wakanyorwa. Zvinyorwa zvisina kukwana zvicharambwa kusvikira mugadziri kubereka kana kuvandudza iwo kunaka kwakaringana.
Mapaipi eSML, zvigadzirwa uye masisitimu ekubatanidza ...
Simbi yesimbi ndiyo yakasarudzika yezvinyorwa ...
Specialty Magirazi: Ndezvipi Zvazvo uye Izvo ...
Iwe une hanya nenzvimbo?
Zvimiro zveakakanda iron pombi